News - Dongguan Raofeng Waxyaabaha Caaga ah Co., Ltd.
Mabda 'noocee ah ayaa wax taaj oo kale lagu durayaa oo ku shaqeynaya caaryada caaga ah?
Waxaan aaminsanahay in asxaab badan oo ku howlan warshadaha caaryada aysan aqoon waxa ka socda wax ku sameynta caag balaastig caag ah, hada si loo kobciyo aqoonta asxaabtaada caaryada ku jirta!
Hordhaca alaabada caagga ka sameysan
Balaastikadu waa iskudhisyo polymer ah, oo badanaa loo yaqaanno balaastik ama makiinado, kuwaas oo lagu polymerized by daro ama uumiga monomers sida alaabta ceeriin. Waxay si xor ah u beddeli karaan halabuurkooda iyo qaabkooda.
Qalabka loo baahan yahay soo saarista wasakhda caaga ah ee loogu talagalay isticmaalka reerka
PP-ka caadiga ah waxaa badanaa loo isticmaalaa makiinadaha dusha ka laalaada ee la isku duro, kuraasta, saxarada, foostooyinka, berkadaha, qalabka carruurtu ku ciyaarto, xafiisyada xafiisyada, qalabka guryaha, fureyaasha, sanaadiiqda wax lagu beddelo iyo wixii la mid ah. , Dahaarka qaboojiyaha, qolo......
Hordhaca alaabada PC-ga ee balaastigga ah
Badanaa waxaa loo isticmaalaa warshadaha shirarka muraayadaha, warshadaha gawaarida iyo elektarooniga, warshadaha korantada, oo ay ku xigto qaybaha mashiinada warshadaha, CD, baakadaha, kombiyuutarka iyo qalabka kale ee xafiiska, daryeelka caafimaadka iyo caafimaadka, filimka, waqtiga firaaqada iyo ......